I-Car Wheel Cleaner Esezingeni eliphezulu - Buyisela Rim Ku-Gloss Yangempela.
Ikhaya / Imikhiqizo / Best Car Wheel Cleaner
Isusa ngokushesha futhi iphula ukungcola! Ngiyiphi ingxenye yemoto yakho ethandeka kunazo zonke? Isondo lakho! Phakathi kokushisa, isimo sezulu esibi nokungcola okungapheli kwama-brake amasondo akho cishe angcolile ngokushesha. I-OPS Rim Cleaner yenziwa ngokuqondile i-eco-friendly yokuhlanza i-powder ukukhomba uthuli olunamandla lwe-brake futhi ishiye amasondo akho engenabala. Geza, sula futhi ubuyisele isondo lakho esinamasondo ku-gloss yasekuqaleni! Siyaziqhenya ngenkonzo yamakhasimende nokwaneliseka futhi sikholwa ukuthi i-Chrome Rim Cleaner ingumkhiqizo omuhle emakethe.
♣ I-OPS Wheel neTire Cleaners
♣ 500g powder, elinezikhwama zeplastiki noma ibhokisi leplastiki.
♣ Kufanelekile ukuhlanza izimoto ezihlukahlukene.
♣ Faka phansi ingaphakathi lokungcola, usheshe uhlakaze.
I-Rim ehlanzekile, isevisi ye-OEM / ODM, Isitolo.
Kufanele usebenzise i-Car Car Rim Cleaner.
Uyazi yonke le mibuzo? Kunzima ukuhlanza izinti ezinenkani, ukungcola kwamafutha, udoti wensimbi, isondo eliphuzi, ogcwele uthuli, oxidiwe kanye ne-lackluster nge-ejenti yokuhlanza engavamile. Iqoqo lamasondo elimangalisa lingenza imoto evamile, esetshenzisiwe ibonakale entsha. Futhi nje nje isikhathi esincane futhi sebenzisa ilungelo lokuhlanza umkhiqizo, indlela enengqondo, khona-ke uyakwazi ukuthatha isondo lakho ukuya ezingeni elingcono. Ukuthutha uthuli, into ephoqelekile ebangelwa ukungaboni ngaso sonke isikhathi lapho usebenzisa ama-brakes, iyonakalisa kakhulu futhi ingabangela ukulimala okuhlala njalo uma ihamba emotweni yesondo eside kakhulu. Yingakho kufanele uhlanze amasondo akho njalo kubaluleke kakhulu.
Indlela yokuhlanza uthuli oluthile olusuka kumavili e-chrome? Okungenani kufanele kube nokuqedwa okusheshayo, ikhono lokuqeda ukuqina okunamandla futhi kungalimazi isondo!
Kungani kuthiwa yiyona engcono kakhulu Ama-Wheel neTire abahlanzekile?
Sithuthukise ucwaningo, ubuchwepheshe bokuthuthukiswa, abasebenzi abathile besayensi ukuthuthukisa imikhiqizo emisha njalo ngonyaka. Wethu i-alloy wheel cleaner iqukethe izici ezinamandla zokuqeda, i-asidi-free ne-pH yefomula engahambisani nayo engakwazi ukungena ngokushesha futhi ingene emthonjeni futhi yenza isikhathi sakho sokuhlanza isondo sibe mfushane kakhulu! Amaphilisi amaningi ahlanzekile angalimaza esiphethweni sakho futhi ahlakaze okungaphezu kwalokho owafuna ukukuhlanza! I-OPS alloy wheel yokuhlanza kit iqala ukusebenza ngokushesha futhi ichithe ukungcola kwensimbi enenkani!
Ngokungafani nomzimba wemoto, izibhamu zayo zivezwe kwesinye isimo esibucayi kakhulu lapho. Sibheka izindlela zokuletha inani futhi uthole umsebenzi
kwenziwe kahle kumakhasimende ethu. Umsizi, ukuhlanza ukukhipha isondo kungenye yezimoto zokuhlanza amasondo, futhi sifuna ukuthi uthole ukuthi ungakwenza kanjani. Ukuhlanza amasondo emoto akudingeki kube nzima! Vele uxubane ngamanzi, bese uwusebenzisa emasondo akho angcolile emotweni.
♦ Ukuqedwa okusheshayo kanye ne-foam iningi.
♦ Iqukethe izici ezinamandla zokuqeda, okungasheshe kuhlakaze izinti.
♦ Iqukethe into ekhanyayo, ukuvikela ngokugcwele ihabhu levili, ukusebenzisa isikhathi eside kwalesi mkhiqizo kungaba yenza isondo sakho semoto sibe mhlophe njengelisha.
♦ Ukuphepha kwe-chrome rim cleaner, mnene, ungathathi lutho olulimazayo ezandleni zakho.
♦ Noma ngabe isimo semoto singcolile okuningi, kuyisiqeshana sekhekhe se-OPS esindayo sama-alloy wheel wheel!
Izici ze-OPS ezenziwe ngokwazo ngeTire Cleaner Izici:
♦ Ukungena okusheshayo
Ucebile ekuhlanzeni ion kanye nekhono lokungena elijulile ukubola ukungcola okunenkani.
♦ Hlanzeka njengentsha
Thuthukisa izenzakalo ezimnyama, ezingenangqondo nezinye izinto zesibhulogi sesondo, buyisele ku-gloss original.
Ingqimba yokuzivikela ebonakalayo ingakhiwa ukuvimbela umonakalo onjengotshani, ukuguguleka kwamanzi, kanye ne-oxidation.
♦ Ukumiswa okusheshayo
♦ Iphephile futhi imo-friendly
Kuyafaneleka ngezindawo ezihlukahlukene zamasondo we-wheel hub, ezakhiwe ngendlela engakhiwe futhi ezingenayo izinto ezinobungozi.
Ungasusa kanjani ukugqwala kusuka ku-aluminium rims?
I-1. Thela isipuni se-2-3 powder singene emgqonyeni, kunconywa ukuthi uthele i-powder kuqala uphinde uthele amanzi.
I-2. Thela amanzi esikhumbeni phezu kwehabhu bese uvumela amanzi ahlale endandeni yensimbi imizuzu embalwa ngaphambi kokuhlunga
ngamathuluzi afana nesiponji njll. Yenzelwe ukuhlanza isondo kanye ne-chrome cleaner, futhi sinesihlungi se-spray
for station carwash. Kuyinto elula kakhulu ukusebenza!
I-3. Hlanza ngamanzi ahlanzekile. (Noma ukuhlanza ngokuqondile nge-high-pressure washer)
I-4. Okokugcina, susa ngendwangu.
Ungayisusa kanjani i-caked ku-grease enjini?
Siphinde futhi sinikeze i-Progreaser ye-Injini evumayo, yenziwa ngefomula yokuhlanza irim.
Khombisa ukuhlanzwa kwenjini yakho engezansi:
Ucabangani ngezinsiza zokuhlanza izimoto ze-OPS? Ngicela, imininingwane engaphezulu Xhumana nathi.
Imoto ye-Car Wheel Cleaner Imininingwane
OPS steel ring self-yokuhlanza agent
Inani US $ 2.20 / Bag (FOB Ningbo / Shanghai)